Njirimara Ọ bụla Usoro Ọdịnaya Ọdịmma Ga-enwerịrị Maka Nnyocha Nchọgharị Nchọpụta | Martech Zone
Njirimara Ọ bụla Usoro Ọdịnaya Ọdịmma Ga-enwerịrị Maka Njikwa Nchọgharị Nchọpụta
Fraịdee, Nọvemba 6, 2020 Fraịdee, Nọvemba 6, 2020 Douglas Karr
M zutere na a ahịa onye na-adọga ha search engine ogo. Ka m nyochachara nke ha Nchịkọta Njikwa ọdịnaya (CMS), achọrọ m ụfọdụ omume kacha mma m na - achọtaghị. Tupu m nye ndepụta nyocha iji nyochaa site n'aka ndị na-eweta CMS gị, ekwesịrị m ibu ụzọ kwuo na enweghị ezigbo ihe kpatara ụlọ ọrụ B NOTGH to inwe usoro njikwa ọdịnaya ọzọ.
A CMS ga-enye gị ma ọ bụ ndị ahịa gị ka ị gbanwee saịtị gị na njem na-enweghị mkpa onye nrụpụta weebụ. Ihe ọzọ kpatara a Nchịkọta Njikwa ọdịnaya bụ ihe dị mkpa bụ ọtụtụ n'ime ha na-emezi usoro kacha mma maka ịmepụta saịtị gị.
Ndị SEO dị ọcha nwere ike ịrụ ụka na ụfọdụ atụmatụ m na-atụle ebe a n'ihi na ha nwere ike ọ gaghị ekwu na ọ bụ ọkwa. M ga - arụrịta ụka banyere Nchọgharị Nchọgharị Ọ bụla, n'agbanyeghị, ogo ogo ọchụchọ ahụ gbasara ahụmịhe onye ọrụ - ọ bụghị search engine algorithms. Kasị mma ị na-emepụta saịtị gị, tinye ego na ọdịnaya dị ukwuu, na-akwalite ọdịnaya ahụ, ma soro ndị ọrụ gị rụọ ọrụ… mma saịtị gị ga-arụ ọrụ na nhazi ọchụchọ.
Ndị ọrụ igwe nke otú igwe nyocha crawler na-achọta, ndeksi na ọkwas gị na saịtị ahụ agbanwebeghị ọtụtụ afọ… mana ikike ịdọta ndị ọbịa, nwee ndị ọbịa ahụ ịkekọrịta ọdịnaya gị, ma nwee injin nchọgharị ahụ agbanweela nke ọma. Ezi SEO bu nnukwu ahụmịhe onye ọrụNa sistemụ njikwa ọdịnaya dị oke mkpa maka ọganiihu gị.
Njikwa ọdịnaya SEO Akụkụ
Kwa Nchịkọta Njikwa ọdịnaya kwesiri inwe ma obu mejuputa ya na ihe ndia:
Ndabere: Ndabere na SEO? Well… ma ọ bụrụ na ị na-atụfu gị na saịtị na ọdịnaya, ọ bụ mara mma siri ike ọkwá. Inwe nkwado siri ike na nkwado nkwado yana yana ịchọọ, nkwado ndabere na saịtị ma weghachite na-enye aka.
Achịcha: Y’oburu n’inwe otutu ihe omuma a haziri nke oma, ikike ndi n’aru oru (na igwe ihe n’ile acho) ighota na ndi isi ochichi di oke nkpa n’agbanye otu ha si ele ọdịnaya gi anya.
Ihe Nchọgharị Nchọgharị: Chrome na Safari na-enye ozi jikọtara na sistemụ arụmọrụ. Mgbe mmadụ dabara na saịtị gị, a na-ajụ ha ma ha ga-achọ ka agwa ha mgbe emelitere ọdịnaya ahụ. Ma Ọkwa na-eme ka ndị ọbịa lọta!
Caching: Oge ọ bụla a rịọrọ peeji, nyocha data na-ejide ọdịnaya ahụ ma jikọta ibe ahụ. Nke a na-ewe ihe onwunwe na oge that na-ewute gị search engine njikarịcha. Inweta CMS ma ọ bụ onye nnabata nwere ikike caching bụ ihe dị mkpa iji mee ka saịtị gị dị ngwa ma belata akụ achọrọ maka sava gị. Caching nwekwara ike inyere gị aka ma ị nweta mwakpo nke okporo ụzọ. Yabụ ị nwere ike nweta ọtụtụ ndị ọbịa karịa ka ị nwere ike ịghara.
Canonical URL: Mgbe ụfọdụ, a na-ebipụta saịtị na otu ibe nwere ọtụtụ ụzọ. Ihe omuma di nfe bu na ngalaba gi nwere ike inwe http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Twozọ abụọ a n'otu peeji nwere ike kewaa ịdị arọ nke njikọ na-abata ebe ibe gị anaghị ahọpụta nke ọma dị ka ọ nwere ike ịbụ. URL nwere ike ịbụ ibe HTML nke zoro ezo na-agwa engines ọchụchọ nke URL ha kwesịrị itinye njikọ ya.
Comments: Nkwupụta tinye uru na ọdịnaya gị. Naanị jide n'aka na ị nwere ike ịkọwa okwu dịka enwere ọtụtụ bọọlụ nọ ebe ahụ na-eme ka ikpo okwu CMS na-eme ka mmadụ jikọta njikọ.
Editọ ọdịnaya: Onye ndezi ọdịnaya nke na-enye ohere H1, H2, H3, siri ike na italic ka etinyere ederede. Idozi onyonyo kwesiri ikwe ka edozi ihe ALT. Idozi mkpirisi nkpuru edemede ga-enye ohere maka ndezi isiokwu TITLE. Ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ CMS sistemụ nwere ndị ndezi ọdịnaya!
Nzipu Nwepụta ọdịnaya: A netwọk nnyefe ọdịnaya bụ a na netwọk nke kọmputa na-geographically dị na-echekwa static ego na mpaghara… ikwe peeji nke mara a otutu ngwa ngwa. Nakwa, mgbe etinyere CDN, arịrịọ peeji gị nwere ike ibudata akụ sitere na sava weebụ gị na CDN gị n'otu oge ahụ. Nke a na-ebelata ibu na sava weebụ gị ma na-abawanye ọsọ nke ibe gị nke ọma.
Nrụ ọrụ arụmọrụ dị elu: Ọsọ bụ ihe niile mgbe ọ bịara n’igwe nchọta ihe. Ọ bụrụ na ị na-anwa ịchekwa ego ole na ole na Bochum, ị na-ebibi ikike gị nke ịdebanye aha na nke ọma na injin ọchụchọ.
Image mkpakọ: A na-ebupụkarị foto n'ime faịlụ buru ibu na-enweghị isi. Ijikọta ya na ihe mkpakọ ihe onyonyo iji belata nha faịlụ na megharia onyonyo maka ilele ihe kachasị mma dị oke mkpa.
Mmekọrịta: Ikike ịgbatị ọrụ nke ọdịnaya gị site na ọgbọ mbu, ịre ahịa email, ịre ahịa akpaaka, ịre ahịa mgbasa ozi mmekọrịta, na nyiwe ndị ọzọ na-enyere gị aka inweta ma jigide okporo ụzọ.
Umengwụ Loading Images: Nchọgharị ọchụchọ na-ahụ ọdịnaya dị ogologo na ọtụtụ mgbasa ozi. Mana itinye ihe oyiyi nwere ike ime ka saịtị gị belata. Igwu umengwụ bụ ụzọ iji kwụnye ihe oyiyi mgbe a na-agba akwụkwọ. Nke a na-enye ohere ibe ibu karịa ngwa ngwa, wee gosipụta onyonyo mgbe onye ọrụ ruru ebe ya.
Ebute ndu: Mgbe atụmanya ịchọta isiokwu gị, olee otu ha si agwa gị okwu? Inwe ụdị ndị na-emepụta ụdị na ebe nchekwa data iji weghara ụzọ bụ ihe ekwesiri.
Nkọwa Meta: Search engines Elezie enwetara meta nkọwa nke a na peeji nke na-egosi na n'okpuru aha na njikọ na a search engine results peeji nke. Mgbe enweghị meta nkọwa dị, search engines nwere ike jidere ederede enweghị usoro si na peeji nke… a omume nke ga-belata gị click-site udu na gị njikọ na search engines na pụrụ ọbụna imerụ gị na peeji nke si indexing. CMS gị kwesịrị ikwe ka ị dezie nkọwa meta na ibe ọ bụla nke saịtị ahụ.
mobile: Mobile search na-agbawa na ojiji dị ka smartphones na mbadamba na-adiaha ofụri. Ọ bụrụ na CMS gị anaghị ekwe ka websaịtị na-anabata HTML5 na CSS3 (nhọrọ kacha mma)… ma ọ bụ opekata mpe, ọ bụrụ na edegharịrị ederede gaa na ekwentị mkpanaka kachasị mma, ị gaghị enwe ike ịhọrọ maka ọchụchọ ekwentị. Ọzọkwa, ọhụrụ mobile formats dị ka IGBOB nwere ike nweta ọdịnaya gị nke ọma maka ọchụchọ sitere na ngwaọrụ Google.
Pings: Mgbe ị bipụtara ọdịnaya gị, CMS kwesịrị itinye saịtị gị na Google na Bing na akpaghị aka na enweghị enyemaka ọ bụla. Nke a ga - ebute igwe si na igwe nchọ ihe wee nweta ihe ọhụrụ gị (ma ọ bụ dezie ya) site na injin ọchụchọ. Ọkaibe CMS engines ga-akarị Ping engines ọchụchọ n’elu ịhazi usoro.
Redirects: Companlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe ma wughachi saịtị ha. Nsogbu dị na nke a bụ na njin ọchụchọ ahụ ka nwere ike na-atụ URL na peeji nke adịghị adị. CMS gị kwesịrị ikwe ka ị zoo okporo ụzọ gaa na ibe ọhụụ ma megharịa injin nchọta ebe ahụ ka ha wee chọta ma depụta peeji ọhụrụ ahụ.
Ntughari bara uba: Search engines na-enye microdata formats maka pagination na breadcrumb njirimara n'ime saịtị gị. Ọtụtụ mgbe, a ga-etinye akara a na isiokwu ị na-etinye na CMS gị ma ọ bụ ịnwere ike ịchọta modulu na-enye gị ohere itinye ya nfe. Snippets bara ọgaranya dị ka atụmatụ maka Google na OpenGraph maka Facebook na-eme ka nsonaazụ ọchụchọ na ịkekọrịta ga-eme ka ọtụtụ ndị ọbịa pịa.
Robots.txt: Ọ bụrụ na ị gaa na mgbọrọgwụ (isi okwu) nke ngalaba gị, tinye robots.txt na adreesị. Àtụ: http://yourdomain.com/robots.txt Enwere faịlụ ebe ahụ? A robots.txt faịlụ bụ isi ikike faịlụ na-agwa a search engine bot / ududo / crawler ihe directories na-eleghara na ihe directories iri ari. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịgbakwunye njikọ gị na saịtịmap gị n'ime ya!
RSS faili ntanetịime: Y’oburu n’inwe ihe ndi ozo ma choro ikwusa blog gi, inwe faili RSS ka o weputa ihe edeturu ma obu utu aha n’etiti saiti bu ihe di nkpa.
ọchụchọ: Ikike ịchọọ n’ime wee gosipụta nsonaazụ dị mkpa dị oke mkpa maka ndị ọrụ iji chọta ozi ha na-achọ. Nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ ga-enyekarị ngalaba nke abụọ maka ndị ọrụ ọchụchọ ịchọọ n'ime saịtị!
Security: Soliddị nchebe siri ike na Bochum dị mma ga-echebe saịtị gị ka a ghara ịwakpo gị ma ọ bụ tinye koodu obi ọjọọ na ya. Ọ bụrụ na saịtị gị na-enweta koodu obi ọjọọ na ya, Google ga-edepụta gị ma gwa gị na Webmasters. Ọ dị oke mkpa na ịnwere ụdị nlekota ma ọ bụ atụmatụ nchekwa ejiri na CMS gị ma ọ bụ na ngwugwu ngwugwu gị ụbọchị ndị a.
Mgbasa Ozi: Ikike ịdepụta ọdịnaya gị na akpaghị aka na aha kacha mma na onyonyo ga - eme ka ọdịnaya gị kerịta. Ikekọrịta ọdịnaya na-eduga na kwuru banyere ọdịnaya gị. Mentions iduga njikọ. Na njikọ na-eduga n'ọkwá. Facebook na-ebido ederede ngwa ngwa, usoro iji bipụta isiokwu niile ozugbo na ibe ika gị.
Njikọ: Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-agụ akwụkwọ na ndị na-agụ RSS adaala n'ụzọ dị n'akụkụ nke ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ikike ịkekọrịta ọdịnaya gị n'ofe saịtị na ngwaọrụ ka dị oke egwu.
Nkpado: Nchọgharị ọchụchọ na-eleghara mkpado meta anya maka isiokwu, mana nkpado nwere ike ịba uru - ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche isiokwu ndị ị na-elekwasị anya na ibe ọ bụla. Mkpado na-enyere aka ịchọta ma gosipụta posts dị mkpa na nsonaazụ ọchụchọ n'ime saịtị gị.
Onye ndebiri ndebiri: Ihe ndebiri ndebiri nke na-ezere iji tebụl HTML eme ihe ma na-enye ohere maka HTML dị ọcha na faịlụ CSS dị mma iji hazie peeji ahụ. Ga-enwerịrị ike ịchọta ma wụnye ndebiri na-enweghị ike ịme mmepe ọ bụla dị mkpa na saịtị gị ka ị na-ejigide ọdịnaya gị na enweghị nsogbu ọ bụla.
XML Sitemaps: A dynamically generated sitemap is a key components na-enye search engines na a map nke ebe ọdịnaya gị dị, otu ọ dịruru mkpa, na mgbe ikpeazụ gbanwere ya. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu saịtị, saịtị saịtị gị kwesịrị ịgbakọ. Ọ bụrụ na saịtịmap gafere 1Mb, CMS gị kwesịrị iwepụta ọtụtụ saịtịmaps wee jikọta ha ọnụ ka igwe nyocha wee gụọ ha niile.
Aga m apụ na otu akụkụ na ebe a; ma ọ bụrụ na gị n'ụlọnga na-ana gị maka mmelite ọdịnaya na ị nweghị ohere a ọdịnaya management usoro na-ebuli gị na saịtị… ọ bụ oge na-ahapụ gị n'ụlọnga na-ahụ onwe gị ọhụrụ onye na a siri ike usoro njikwa ọdịnaya. Ndị ọrụ oge ụfọdụ na-emepụta saịtị dị mgbagwoju anya nke na-agbanwe agbanwe ma chọọ ka ị gbanwee maka mgbanwe ọdịnaya ka ị chọrọ ha… adịghị anabata ya.
Tags: ampcms nkemicrodataọgaranya snippetsrobots.txtsearch engine njikarịchaAseo ndenye egoSitemapokwu mkpokọtaxml saịtị saịtị
Ihe kpatara Ntughari Okwu Ebumnuche Dị Oké Mkpa Maka Ndị na-ere ahịa Na-agagharị Na Kuki-Obere Ọdịnihu
Nov 13, 2010 na 12:37 PM
Kedu? Enweghị ndụmọdụ ọ bụla? Kedu otu ụlọ ọrụ si mara nke CMS ha chọrọ ma ọ bụ etu siri ike ngwọta ga-arụ ọrụ? Ezi ndepụta, Maazị Karr.
Mar 20, 2011 na 4: 28 AM
Hụ ndepụta a n'anya! Nke a bụ ụkpụrụ m ugbu a ka m na-amalite ịzụ ahịa maka CMS. Anọ m na-eme atụmatụ weebụ niile n'onwe m, mana m chọrọ ibelata oge m na-eji ede koodu ka m wee nwekwuo oge m na-etinye na ịkọwapụta weebụsaịtị. Have nwere ndụmọdụ ọ bụla na usoro DIY (WordPress, Joomla, wdg)?
Ọkt 8, 2011 na 6:43 PM
URL ahụ na-arụ ọrụ, ọbịa. Agbanyeghị, ezigbo CMS ga ping / nyefee saịtị gị oge ọ bụla ị bipụtara ọdịnaya!
Ọkt 8, 2011 na 6:45 PM
Naanị ihe m ga-agbakwunye na nke a ugbu a bụ na ikpo okwu ntanetị kwesịrị igosipụta akara rel = ”edemede” ma kwe ka njikọ na profaịlụ Google ka ihe onyonyo ndị edemede gosipụta na nsonaazụ ọchụchọ.
Ọkt 8, 2011 na 10:38 PM
Na-ekwenye kpamkpam - Enweghị ụlọ ọrụ kwesịrị ịbụ CMSless.